waa qiso dhab ah | BOGGA ARIMAHA JACEYLKA KA DHIGO HOYGAAGA KOOWAAD
waa qiso dhab ah
waa qiso dhab ah oo dhacdey ma ahan wax qiyaali ah misena aan la is dhihin webka halaguu soo galo aan aheyn waa saaxiibkiina waa qalbijaceyl oo idin leh daawasho wacan
waa qiso dhab oo dhacdey ma ahan qiyaali mise webka halaguu soo boqoodo insha allah waxaan idinka rajeynayaa inaad si fiican ugu qancidoontaan waa asxaabtiina hawada qalbijaceyl oo idin leh sidaas iyo akhrisasho wacan
Markii ay cashadoodii dhammaysteen buu dareemay in ay gabadhu weli soo eegayso. Wuu jalleecay oo inta u dhoollacaddeeyey dhan uga jeestay. Wuxuu bilaabay in uu isku madaddaaliyo koobkii uu wax ku cabbaayey. Qoob fardood buu kaga yeersiiyey, Krrrrm! Krrrrm! Krrrrm!.
Mar ciddiyihiisa ayuu ku falaadaa, marna hareerihiisa ayuu daawadaa. Wuxuu u bartay in uu weerarka daymada hablaha kaga xishoodsiiyo, balse isagaa markan diiradda lagu hayey. Gabadhu maba libidhsanayso! Cawil intuu xaalladdaas u adkaysan waayey buu ku yiri, “Hani, ma waxaad doonaysay in aad wax ii sheegto?” “Haa. Walaalow waxaan ka fikiraayey waxa aad aniga iga damacsan tahay.” Cabbaar intay ka aamustay bay u raacisay, “Ma guur baad iga rabtaa, mise gaabsi?” Boorsadeedii markan intay kursiga dhinaceeda ka soo qabsatay bay dhabteeda saaratay. “I dhagayso,” ayuu yiri Cawil. “Seddex goor ayuun baan is aregnaye, sidee iiga fillaysaa in aan go’aan caynkan ah gaaro?” “Anigu ninyahow derbiyo isistaag iyo isdabacarcarar wakhti uma hayo ee haddaad wax ii haysid haatanba ii sheeg.” “Waxay ila ahayd marka hore in aan is dabeecad baranno, ka dibna haddaan isu qalanno aan guur ka sheekaysanno.” Welwel baa Cawil ku jiray, wuxuuse door biday in uu daacad ugu warramo. Markuu intaas yiri bay illayn diyaar
bay ahayde Hani miiskii ka kacday. Gacanteedii buu Cawil qaabtay, saa way iska gundhisay oo ka sii dhaqaaqday! “HANIII!” ayuu kaga daba qayliyey. Gabadhii intay socodka boobsiiyey ayey ugu dambeyntii orod albaabka uga baxday, dibna uma soo jeedsan. “Kaagaas oo kale waannu naqaannaa!” ayey ugu jawaabtay markay waddadii timid oo aragtay inuu Cawil ka soo daba qaatay. Durba intay taksi meesha maraayey gacanta u haadisay ayey degdeg uga gashay. Cawil oo yaabban, oo naxsan ayaa sii eegay illaa uu taksigii ka libdhay. –oo00oo– Dhowr toddobaad ka hor habeenkaas ayuu Cawil waxa uu booqasho maalin Sabti ah ugu tegay saaxiibkiis Xasan. Markii ay qadeeyeen iyagoo fadhiga ku nasanaya ayey Suleekha, xaaskii Xasan, inta ay u timid ku tiri, “Waxaan u malaynayaa in ay sheeko badan isugu kiin hartaye, waan idiin firaaqaynayaa xaafadda. Shaahii tarmuuskuu idiinku jiraa, haddaad ii baahataana waxaad iga soo wacdaan guriga reer Afrax.” “Waad ku mahadsan tahay qadadaadii macaanayd, dumaashi,” ayuu Cawil Suleeqa oo sii socota ku yiri. “Adaa mudan,” bay tiri, “Mar mar noo kaalay oo ha lagu arko.” Xasan intuu kacay ayuu xoogaa afadiisii albaabka kula sii faqay, ka dibna intuu ka soo xiray ayuu la soo fariistay Cawil. “Ninyahow waa adigan baraaraye malaha guurkii kaagama uu darin.” Ayuu Cawil yiri. “Cawilow faa’iidada guurku leeyahay waxaa ugu yar nafaqada. Bal xusuuso waagii aannu wada degganayn ee aan soolahaan aheyn ka waran baastidii aanu kadjabka ku idaaman
Cawil intuu madaxa ruxruxay ayuu yiri, “War ha i xasuusin xaalladda aan weli ku jiro! Dadkoo dhan ma sidaadaad moodday?” “Waxaan uga dan leeyahay marka aad guursato, in ay niyaddaadu degayso, iimaan wanaagsan aad yeelanayso, bulshaduna ku ixtiraamayso. Waxaad tahay nin dhallin yar oo shaqaysta, wax kaa dhiman oo aan ahayn qof nolosha kula qaybsada ma jirto. Haddaba wixii wanaagsanba waxaa fiican in aan kula jeclaado ee saaxiib xertayada ku soo biir.” Xasan wuxuu u dhaqaaqay dhankii jikada si uu shaahii u keeno. Markuu Xasan soo noqday ayuu Cawil yiri, “Xasanow, gabar wanaagsan oo aan isu qalanno ayaan weli raadinayaa, marka aan helana haddee ogow minxiiskaygii baad tahay.” “Sharaf wayn bay ii tahay in aan kugu garab galo,” ayuu yiri Xasan. Markii uu bakeeriyadii shaahii ku shubay ayuu su’aalay in uu caddays rabo. “Maya kan labaad baad ii caddayn doontaa,” ayuu Cawil kula kaftamay. “Haye,” ayuu Xasan yiri, intuu shaahiisii kabbaday, “bal warran; maalmahan maxaa la soo sheegay?” “Arrimahaas inta aynaan u gelin, waxaan doonayaa in aan kaa waraysto sida aad Suleekha ku kulanteen. Waxaan uun aragnay adigoo leh ‘waan idinka guurayaa … waan guursanayaa’. Sidee ku baratay ilaa waad naga qarsataye?” Xasan intuu ku qoslay buu yiri, “Waxaan ka soo qaaday Keele iyo Eglinton iyadoo bas ku sugaysa. Dixon baan keenay, kadibna taleefonkeedaan waydiistay iyo inaan wada sheekaysan karno, seddex bilood ka dibna arrimihii oo dhan waan soo gebagebaynay, maantana waa adiga na arkaaya.” Cawil waxa uu garwaaqsaday in uu ku khaldanaa hablihii faraha badnaa ee uu mar walba dariiqa ku dhaafi jiray. Wuxuu yiri, “Maanta ka dib lagama yaabo in aan qof Soomaali ah, wiil ama gabar, aan waddada uga tago. Illayn talo isuma kaa sheegto.” –oo00oo– Cawil waxa uu ku tashaday in uu tijaabiyo qaabkii Xasan iyo Suleekha isku barteen. Waxaa ka hor yimid riwaayadaha iyo xafladaha dhallintu ku kulanto oo uu natiijo wanaagsan ka waayey. Reerkooda iyo hadday ku tahay deriskaba kuma aanu arkin gabar uu la dhaco. Maalin walba marka uu shaqada u sii socdo ama ka soo socdo sida taksiilaha ayuu waddada hareeraheeda ka eegaa gabar Soomaali ah oo bas sugaysa. Meel walba oo uu safarkiisa ka bilaabayo waxa uu ku ducaystaa, “Ilaahow gabar Soomaliyeed oo bas sugaysa
Haddii uu firaaqo u helo, wuxuu soo agmaraa dugsiyada ay dhigtaan, marka ay ardadu soo baxdo. Waqtigii iyo shidaalkii baa kaga dhammaaday markuu dhowr maalmood sidaa baadigoob ugu jiray. Maalin dambe ayuu adeeg u soo aaday suuq wayn oo ay Soomaaliduna wax ka iibsato. Intii uu ku jiray ayuu arkay gabar bilicsan oo qaybta shaaha iyo sonkorta dhex socota. Dhankeedii buu u soo dhaqaaqay. Markii uu in yar u soo jiray baa laba carruur ah oo aanu markii hore arkin ay ku soo baxeen iyagoo leh, “Hooyo! Hooyo, nacnac noo gad.” Intuu iska salaamay buu hore u sii dhaafay. Seddex kale ayuu dhinaca qudaarta ku arkay, waase cajabin waayeen. Cabbaar buu meelaha marmaray, wax uu ku dhacana waa waayey. Dibedda markuu u soo baxay ayuu arkay laba gabdhood oo ay ka dhacayso oo suuqa sii gelaaya. Cawil wuxuu is yiri, “Sidaan meesha kagama tegi kartide, wixii soo baxa iska sug”. Gaarigiisii buu albaabka agtiisa soo dhigtay. Dadka kale wuxuu ugu muuqday in uu qof sugaayo, cid danaynaysayse ma jirin aan ka ahayn dhallinyaro gawaaridooda, sida taksiilaha, dadka alaabta ugu qaada oo meesha ka qaraabta. Cabbaar buu fadhiyey oo isagoo isu camiraaya kolba saacaddiisa eegaa. Dhallinyaro wiilal ah oo taqaanay oo la kulantay ayuu xitaa ka diiday inuu caawiyo. Markan waxay ka ahayd, “Ilaahow gabdho Soomaaliyeed oo gacan iiga baahan”. Saacad ka dib buu kafee ka doontay. Soo noqodkiisii ayuu arkay, gabdhihii uu u hanweynaa oo ka raacay gaari kala jiidan oo wiilal asaaggiis ah ay wataan. Markay saacado ku dhaafeen ayaa waxa dibedda soo istaagtay haweeney waayeel ah oo dhididku ka tifqaayo iyadoo labo bac oo waayeyna la luudaysa. Wuxuu is yiri, “Tolow tan wax u ciidamiya ma weyday?” Intuu soo degay ayuu ku yiri, “Eeddo, keen kuu qaadee.” “Maandhow duca qabaad tahaye, hoo,” ayay haweenaydii la soo boodday. Intuu alaabtii gaariga u soo saaray buu iyadiina albaabka ka furay. Markay soo galeen buu haybiyey halka ay deggan tahay, waxaanay u sheegtay in ay Dixon u socoto. “Eeddo,” ayuu Cawil ku yiri markan oo ay waddadii ku soo dhaceen, “alaabtaan oo dhan maxaa kugu raray?” “Eeddo wiilkaygii oo Iglan jooga ayaan oodkac u jarayaa. Xoolihii waddankaasoo idil baa la yiri cudur baa kaga dhacay. Eeddo waa madiyoo ma doonayo inuu iga jirrado.” “Ma keligiis baad carruur ka leedahay?” “Maya ee gabdho aan dhalay baa halkan jooga.” Cawil uurkuu ka yiri “Haakah! Wallee maantay kaa fuqday”. Intuu soo jalleecay buu ku yiri, “Eeddo Cawil baa la i yiraahdaa ee adiguna magacaa?” “Cambaro,” ayey ugu jawaabtay Waxay yimmaadeen daartii ay Cambaro degganayd. Intuu soo degay buu albaabkii ka furay alaabtiina u soo dejiyey. Wuu u soo qaaday oo ilaa gurigeeda u keenay. Waxay haweenaydii kaga dhaaratay inaanu bixin ilaa uu inta soo galo wax qabow cabbo. Albaabkii intay in yar furtay ayey gudaha ugu qaylisay, “Hibaaqeey hooyo, waa la ila socdaa!” Daqiiqad ka dib bay soo galeen gurigii si gabadha gudaha ku jirta ay u siiyaan fursad ay isugu diyaariso. Markuu Cawil alaabtii gudaha u dhigay baa loogu baaqay kuraastii fadhiga in uu ku nasto, haweenaydiina waxay gabadheedii ku amartay in ay wiilka wax qabow siiso
Waa ay socotaa la soco qeybta labaad
waxaa sheekadaani tafatirey oo isku dabaridey
mr c/casiis maxamed sheekh axmed ( qalbijaceyl)
Dhacdadaan ayaa waxay ka dhacday gobolka Seattle Washington ee cariga Maraykan, iyadoo ay dhex martay lamaane Soomaaliyadeed oo aad isku jeclaa. jaceyl